Viaccess-Orca IBC2018 ပြသထားသော Preview | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Viaccess-Orcas IBC2018 ပြသခဲ့သည်ကို Preview
Viaccess-Orcas IBC2018 ပြသခဲ့သည်ကို Preview
နေရာတိုင်းမှာသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို TV များအတွက်စားသုံးသူဝယ်လိုအားသိသိသာသာကြီးထွားလာသည်။ အော်ပရေတာတိုင်း screen ပေါ်မှာအဆုံး-အသုံးပြုသူများအတွက်တစ်စိတ်ကြိုက်နှင့်လုံခြုံတီဗီအတွေ့အကြုံကိုပေးငွေရှာခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကိုကြည့်အမျှသူတို့ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ပါတယ်။
IBC2018, Viaccess-Orcas (VO) မှာစမတ်နှင့်ဘေးကင်းဒီဂျစ်တယ်တီဗီနှင့် OTT အတွေ့အကြုံကိုပေးနှင့်အတူပါဝင်အမြစ်တွယ်စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရာယင်း၏အဆုံးမှအဆုံးသို့အကြောင်းအရာကာကွယ်မှုနှင့် modular တီဗီပလက်ဖောင်းဖြေရှင်းနည်းများ, တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တွေ့ဆုံ VO နှင့်ရပ် 1.A51 မှာနောက်ဆုံးပေါ်ဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေတွေ့ရှိ: www.viaccess-orca.com/what-s-new/events/ibc-2018
IBC2018 မှာ Display ကိုအပေါ် VO Solutions
တစ်ဦးမဖြစ်မနေအတွေ့အကြုံအပ် VO ရဲ့အဆုံး-to-end တီဗီပလက်ဖောင်းနှင့်အတူငွေရှာ Boost
အ VO လုံခြုံ video player ကိုတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုကြည့်အတွေ့အကြုံကိုဖွင့်ဖို့ပရီမီယံ VOD နှင့်တိုက်ရိုက်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုအဓိက DRMs နှင့်အတူပေါင်းစည်း, multi-platform ကိုကစားသမား
အဆင့်မြင့် analytics dashboards
တစ်မူထူးခြားသောရှာဖွေရေး-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tool ကို
အဆိုပါအပြည့်အဝစီမံခန့်ခွဲဖြေရှင်းချက်ထူးချွန်တီဗီန်ဆောင်မှုကယ်တင်တတ်၏, နည်းပညာ, အပြိုင်အဆိုင်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိန်ခေါ်မှုများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တုံ့ပြန်ရန်အော်ပရေတာဖွ; နှင့်အော်ပရေတာ, စီမံခန့်ခွဲထုတ်ဝေရန်, personalize နှင့်မျိုးစုံကိရိယာများပေါ်တွင်အကြောင်းအရာမှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်များ '' ဒေတာများနှင့်အတူလိပ်စာတီဗီဖွင့်ပေးခြင်း
တီဗီကြော်ငြာဝင်ငွေဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာစျေးကွက်များကစိန်ခေါ်ခံနေရမှုနှင့်အတူဥရောပရုပ်သံလိုင်းတစ်မူထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းအခွင့်အလမ်းအဖြစ်လိပ်စာတီဗီကြည့်ပါ။ ရလဒ်အဖြစ်အော်ပရေတာကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားသောကိရိယာများပေါ်တွင်ပစ်မှတ်ထားအိမ်ထောင်စု-Level ကို enable ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေမှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အနေအထားတွင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ရှာဖွေမတွေ့ရှိရသည်။ VO နှင့်၎င်း၏မိတ်ဖက်, SoftAtHome နှင့် Viznet, ထိုကဲ့သို့သော GDPR အောက်မှာဒီဇိုင်းအားဖြင့် privacy နဲ့လုံခြုံရေးကိုပေါင်းစပ်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအီးယူတိကျတဲ့အတူပြုလုပ်ရန်သဟဇာတတစ်ဦးကိုအကောင်းဆုံး-of ဖောက် end-to-end လိပ်စာတီဗီဖြေရှင်းချက်ကမ်းလှမ်းရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ IBC2018 မှာသရုပ်ပြ VO ရဲ့ဆန်းသစ်ပရိသတ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ပါရှိပါတယ်နှင့်အော်ပရေတာကသူတို့တီဗီ data တွေကိုငွေရရှိအောင်ကူညီဖို့အထူးသဖြင့်စွမ်းရည်ပါလိမ့်မယ်။
VO web ပေါ်မှာတရားမဝင် streaming များတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပင်လယ်ဓားပြတိုက်ဖျက်ဖို့တရားဝင်သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုစုဆောင်းရန်အော်ပရေတာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကြောင့် IBC2018 မှ Anti-ခိုးကူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို၎င်း၏မျိုးဆက်သစ် suite ကိုယူလာသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, VO ရဲ့ Real-time DRM analytics စွမ်းရည်သရုပ်ပြလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများခိုးကူးဖြစ်ရပ်များအဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုကွဲလွဲချက်များ၏အတုထောက်လှမ်းရေး-enabled ထောက်လှမ်းတစ်ဦးပရီမီယံအကြောင်းအရာ service provider ကရင်ဆိုင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်စိန်ခေါ်မှုများသို့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှတန်ပြန်တဲ့ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူ coupled ဤအသိအမြင်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုအမြတ်အစွန်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်အောင်, တစ်ဦးကလုံခြုံရေးလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့်အနီးရှိ-အစစ်အမှန်အချိန်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်လာသည်။
လှုပ်ရှားမှုအတွက် VO Technologies က
VO IBC2018 မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကုမ္ပဏီ၏နည်းပညာများဖေါ်ပြခြင်းအတော်ကြာဆန္ဒပြပွဲများပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
ကမ္တာ့နည်းပညာ Group မှ, တစ်ဦးဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာနှင့်အတူတစ်ဦးကသရုပ်ပြ ျမန္မာႏုိင္ငံ, အော်ပရေတာကိုအောင်မြင်စွာက၎င်း၏ LaLaKy အဘို့, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့် On-demand အပါအဝင်အရည်အသွေးမြင့် OTT အကြောင်းအရာပို့ခြင်းဖြစ်သည်ဘယ်လိုတခုအဖြစ်ပါ! VO ရဲ့ TVaaS ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူဝန်ဆောင်မှု။
လိမ္မော်ရောင်စပိန်နှင့်အတူ VO ရဲ့ဖြန့်ကျက် OTT powering တစ်စပ်က Android STB နှင့်အတူမိတ်ဆက်ပြသသွားမည်ဖြစ်ပြီး IPTV ဟာယပူဇော်သက္ကာ။ အဆိုပါလိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှု VO DRM ဖြေရှင်းချက်အားဖြင့်လုံခြုံနှင့် STBs, စမတ်တီဗီ, နှင့်မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။
VO နှင့်အတူပေါင်းစပ်ယင်း၏ VO ကစားသမားကို အသုံးပြု. တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အနိမ့်အောင်းနေချိန်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Anevia'' s ကိုနည်းပညာ။
Wibox ရဲ့ IPTV ပူဇော်သက္ကာကိုတိုက်ရိုက်အပါအဝင် 4K အကြောင်းအရာ, ကာကွယ်, VO DRM ဖြေရှင်းချက်စွမ်းအားဖြင့်တစ်ဦးကို Android STB ပေါ်တွင်ပြသပါလိမ့်မည်။
Viaccess-Orcas OTT နှင့်တီဗီပလက်ဖောင်း, content တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်တီဗီအတွေ့အကြုံအတွက်အဆင့်မြင့်ဒေတာဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအကြောင်းအရာပေးပို့, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ငွေရှာခြင်းအတွက်ဆန်းသစ်သော end-to-end, modular ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်မှု 20 နှစ်ကျော်နှင့်အတူ, Viaccess-Orcas အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးနဲ့ TV အော်ပရေတာတစ်ဦးစမတ်နှင့်ဘေးကင်း TV နဲ့ OTT အတွေ့အကြုံကိုပုံဖော်ကူညီပေးသည်။
Viaccess-Orcas သည့်လိမ္မော်ရောင် Group ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီရဲ့ဖြေရှင်းချက်ထက်ပို 35 သန်း subscriber များအားရောက်ရှိ, 27 နိုင်ငံများတွင်ကျော်ထဲမှာချထားပါပြီ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.viaccess-orca.com သို့မဟုတ်တွစ်တာ @ViaccessOrca နှင့် LinkedIn တို့အပေါ်ကုမ္ပဏီကလိုက်နာပါ။
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.202comms.com/ViaccessOrca/180731VO.docx
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CES2017 အကြောင်းအရာ Delivery အကြောင်းအရာငွေရှာခြင်းအတွက် အထောက်အပံ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပေးပို့ IBC2018 OTT OTT Solutions SoftAtHome, MStar, CES2017 က Ultra HD ဖိုရမ် Viaccess-Orcas ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality 2018-07-31
ယခင်: Sigma အရီဇိုးနားကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့် New York မှာ၎င်း၏မှန်ဘီလူးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်မယ့်ဓါတ်ပုံပညာစိတ်အားထက်သန်ဖိတ်ခေါ်
နောက်တစ်ခု: Artel ဗီဒီယိုစနစ်များကြေညာချက်များ xView စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း